> Resource > iPod > Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka Computer si ay iPod taabashada
Ma badbaadiyey badan oo sawiro on your computer, oo doonaya in ay sawiro ka computer wareejiyo iPod xiriiri u previewing iyo wadaagista ka mid ah saaxiibadaa waqti kasta iyo meel kasta. Haddii aad go'aansato in aad nuqulka sawiro si aad iPod xiriiri ay u syncing la Lugood, waxaad ka heli doontaa dhibaato. Lugood hubaal ka saari doonaa sawiro in Photo Library ama albums oo kale inta lagu guda jiro nidaamka ka. Waa mid laga cabsado. Sidaas darteed, sida aad u dhoofin karaan sawirada kombiyuutarka si aad iPod taabashada aan laga badinin ee photos hore aad iPod taabto?
Dhab ahaantii, in aad nuqulka sawirada kombiyuutar si ay iPod taabto, waxaad isku dayi kartaa computer xirfadle in iPod xiriiri kala iibsiga - Wondershare TunesGo (for Windows version) ama Wondershare TunesGo (Mac) . Barnaamijka waxa loo habeeyey si ay u maareeyaan ku jira oo dhan ee aad iPod, iPhone iyo iPad. Sidaa daraadeed, waxaad tahay inay awoodaan inay inay u dhoofiyaan sawirada iyo albums ka PC aad iPod taabashada aan laga badinin wax sawir ku saabsan iPod taabto.
Sida loo sawiro ka computer wareejiyo iPod taabashada
Download version saxda ah ee PC si iPod xiriiri kala iibsiga on your computer ama Mac. Markaas diiradda saaraan tallaabooyinka fudud ee hoose. Waxaad ugu dhakhsaha badan u yaqaaniin doonaa talaabooyinka.
Halkan, waxaan isku dayi doonaa waxa la version Windows ah. Sida user Mac ah, waxaad qaadi karaan tallaabooyinka ka mid ah la version Mac ka dib markii maraya tallaabooyinka.
Step1: Orod barnaamijkan iyo in ay ku xirmaan iPod xiriiri computer
Si aad u hesho barnaamijka bilaabay, in aad marka hore waa in loo soo dajiyo aad kombuutarka. Markaas riix "file TunesGo.exe Wondershare inay daabacaan. Connect aad iPod xiriiri computer via cable USB in kulan la iPod la taabto. Markaas barnaamijkan lagu ogaan doonaa oo ugu dhaqsaha badan u akhri qalab aad ka dibna tusi doono oo dhan macluumaad ah ee aad iPod taabashada ee aasaasiga ah furmo suuqa.
Fiiro gaar ah: Waxaad u baahan tahay si loo soo dajiyo Lugood on your computer ugu horeysay, ka dibna u isticmaali TunesGo kaa caawinaya in aad u guurto photos dhexeeya PC iyo iPod taabto.
Step2: ka PC dhaqaaq photos in iPod taabashada
Ka dib markii isku xira iPod xiriiri your computer, waa in aad ku dhufo "Sawirro" khaanadda tagay. Daaqadda maamulka sawirada, furo album ah, sida Photo Library. Ama guji "Add" si ay u abuuraan album cusub. Markaas, guji "Add" mar kale. Dooro sawiro ka furmo suuqa pop-up ah. Ka dib markii in, sawirka wareejinta bilaabmin.
Ka sokow, computer si iPod xiriiri kala iibsiga weliba in aad u hagaagsan sawiro ka PC in iPod xiriiri by jiiday iyo tagtey. Raadi sawirro aad doonayay oo la furo album in aad rabto in lagu badbaadiyo sawirrada. Markaas riix badhanka bidix ee aad mouse ilaa aad sawiro ku biiro album ah.
Fiiro gaar ah: xiriiri 5/4/3 macruufka socda iPod 5, 6 ama 7 buuxda oo ay taageerayaan version daaqadii. The version Mac taageertaa iPod xiriiri 5/4 ku salaysan arrimo 5/6/7.